I-Sadtu iyaziqhathilula kweyokwehla kwemiphumela kamatikuletsheni | News24
I-Sadtu iyaziqhathilula kweyokwehla kwemiphumela kamatikuletsheni
INYUNYANA yothisha i-South African Democratic Teachers Union (Sadtu) iyaziqhathulula ezinsolweni zokuba nesandla ekwehleni kwezinga lemiphumela kamatikuletsheni ka-2015 KwaZulu-Natal.
Lokhu kuvezwe obhekelele izindaba zabasenzi kule nyunyana ophikweni lazwelonke uNksz Otty Sibiya, ngenkathi amalunga esiShayamthetho KwaZulu-Natal nezikhulu zoMnyango wezeMfundo bevakashele ezinye zezikole zamabanga aphezulu eHowick ngesonto eledlule.
Ekhuluma kwesinye sezikole uSibiya uthe sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi kugxekwe le nyunyana njengenyunyana enkulu, mayelana nokungahambi kahle ezikoleni, ikakhulukazi ngemiphumela kamatikuletsheni.
Uthe: “Njengenyunyana siyezwa emithonjeni ehlukene yezindaba kugxekwa thina ngokwehla kwezinga lemiphumela kamatikuletsheni. Siyaziqhelelanisa nakho konke okubi okushiwo ngale nyunyana. Le nyunyana igxekwe kakhulu ngokuthi amalunga ayo iwona aletha uthuthuva ezikoleni eziningi kulesi fundazwe. Siyikhathalele imfundo yezingane zethu, yingakho namalunga ethu efundiswa ngokubaluleka kokuhlonipha isiko lokufunda.
“Yingakho nasezikoleni eziningi eziphethwe othishanhloko abangamalunga ethu, imiphumela ijwayele ukuhamba kahle. Kulo nyaka sizothula izinhlelo zokuthuthukisa imiphumela kamatikuletsheni ezikoleni ezingenzanga kahle zakulesi fundazwe.
“Lezi zinhlelo asihlosile ukuthi zisize kuphela lezo zikole ezingenzanga kahle, kepha nezikole jikelele.”
Ngonyaka odlule uNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo kuleli uNkk Angie Motshekga ugxeke le nyunyana ngokugxambukela ekuphathweni kwezemfundo, kulandela uphenyo ngezinsolo zokudayiswa kwezikhala zothisha nothishahloko izinyunyana. Ngokombiko awethula, ungqongqoshe wakhala ngokuthi izinyunyana zigxambukela ekulawulweni kwezemfundo, okugcina sekuba nomthelela omubi ezikoleni ngengoba kugcina sekuphazamiseka nabafundi.
USibiya uthe lolu hlelo lokuthuthukisa imiphumela luzomenyezelwa maduze njengoba kusafanele bathintane nezinhlaka ezihlukene.